Tattoo qoobka badda iyo macnahooda | Tattoo
Tattoo turkeyga badda, oo matalaya midowga u dhexeeya dhulka iyo cirka
Ma aha Cherry | | Tattoos Xayawaan ah
Waxaa jira dad badan Tattoo xayawaanka in aan ku daabacnay Tatuantes. In kasta oo, waxaan u arkay inay xiiso ii tahay inaan ogaado in midkoodna tifaftireyaasha aan waligood waligood ka hadlin astaamaha qoolleyda badda iyo macnahooda, mowduuc socdaal dheer ku maraya quruxdiisa iyo macnihiisa quruxda badan.
Taasi waa sababta, anigoo ka faa'iideysanaya xagaaga, ma heli karo waqti ka wanaagsan tan oo aan uga hadlo tattooska xamaamka badda. Tattoo oo, ka duwan waxa ay u muuqan karto, ayaa qariya macno qurux badan. Sidoo kale, waxay ku jirtaa dhaqamo badan waxayna yeelan kartaa macno badan oo kala duwan, wax aan ka hadli doono xiga.
1 Micnaha qoolleyda
2 Fikradaha tattoo digaagga
2.1 Qoolleyda badda, ku qulqula hada
2.2 Qoolleyda qabyaaladda, ee la xidhiidha halyeeyadii hore
2.3 Badmaaxiinta iyo qoolleyda, naqshad dhaqameed
2.4 Tattoo tattle turtle
2.5 Qolfka qalfoofka leh adduunkiisa qoloftiisa
2.6 Diiriga afarta cunsur
3 Sawirada Tattoos Badda ee Turtle
Ugu horreyntii, waa inaan ka faalloonnaa, dhaqanka Griigga, diirraduhu waa astaan ​​dumar, si kastaba ha noqotee, noocyada noocan oo kale ah kuma koobna oo keliya dumarka, maxaa yeelay sannado badan, waxaa jira khuraafaadyo iyo halyeeyo badan oo ku wareegsan xayawaankan.
Tusaale ahaan, Bariga Dhexe waxaa loo arkaa in qoolleydu astaan ​​u yihiin midowga dhulka iyo cirka dhexdooda. Intaa waxaa sii dheer, gees ugama dhigi karno cimri-dhererkeeda caanka ah. Waana mid ka mid ah xayawaanka noolaan kara tirada ugu dheer sannadaha. Tan ka sokow, waxay sidoo kale la xiriiraan xigmad tan iyo, sida bulshooyin badan, dadka waayeelka ah waxaa loo tixgeliyaa inay caqli leeyihiin sannado badan oo ay noolaayeen, isla sidaas ayaa ku dhacda xayawaankan.
Dhinaca kale, iyo mahadnaqooda qolof ahaanta, astaamaha kuleylka badda ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa xoog, is-aqoon iyo qoto dheer shucuur. Tan waa inaan ku darnaa taas, nolosha qoolleyda wax walba waxay umuuqdaan in lagu sameeyay dadaal, dulqaad iyo deg deg la'aan. Hab nololeed ay inbadan oo naga mid ahi jeclaan lahayd inay yeelato.
Fikradaha tattoo digaagga
Way badan yihiin tusaalooyinka tatooyada qoolleyda badda, oo leh kumanaan qaab iyo naqshad leh. Oo hadda waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah.
Qoolleyda badda, ku qulqula hada
Gorgorrada badda waa xayawaan soo jiidasho leh oo karti u leh dabaasha kumanaan kilomitir, oo ay wataan badweynta si wax yar loo fududeeyo (waxaan u maleynay inay aheyd wax filimka Nemo raadinta buunbuuniyey, laakiin waxay u muuqataa mid run ah), noloshooda oo dhan iyo inay biyaha uga tagayaan oo kaliya inay ukumo dhigaan.
Waxaa la rumeysan yahay inay noolaan karaan illaa 80 sano. Waqtigaan la joogo waxaa jira ku dhowaad toddobo nooc oo qoolleyda badda ah, oo intooda badan khatar ugu jira baabi'inta.
Saddexdaan sawir ee xamaamka badda, in kasta oo lagu sameeyay qaabab kala duwan, waxay leeyihiin dhowr waxyaalood oo caadi ah, sida qoolleyda, durdurka iyo ubaxyada, oo mid walboo sida uu jecel yahay u shakhsiyeeyo. Markii ay weheliyaan waxyaabahan, tattoo wuxuu astaan ​​u yahay xorriyadda, xaqiiqda ah inaad naftaada u oggolaato inaad la socoto socodka iyada oo aan walwal dheeraad ah laga qabin.
Qoolleyda qabyaaladda, ee la xidhiidha halyeeyadii hore
Waxaan sidoo kale leenahay tattooska badda ee loo yaqaan 'turtle tattoos' oo lagu dhiirrigeliyo qaabka loo yaqaan 'tattoos' qabiilooyinka caadiga ah. Qoolleydu waa xayawaan caan ku ah adkeysi, xoog, iyo adkaysi. Xaqiiqdii, waxay ka gudbi karaan badweynta dhowr jeer noloshooda. Dhaqammo kala geddisanna qoolleyddu waxay mas'uul ka tahay socodka dhulka iyadoo loo marayo koonkan (oo si sax ah ugu baahan saddexdan shey, xoog, adkeysi iyo iska caabin)
Waqooyiga Ameerika Dhaladka Mareykanka waxay aaminsan yihiin in dhulka, in kastoo qaar yiraahdaan inuu yahay kaliya qaaradda Ameerika, uu ku sii fido dusha qolofta tolmada. Waxaa la sheegay in markii hore meeraha ay ku fataheen biyo isla markaana xayawaanku isku dayeen inay soo ceshadaan xoogaa dhul ah si ay u sameystaan ​​jasiirad. Xayawaankii ugu dambeeyay ee la isku dayo, muskrat, wuxuu ku guuleystay inuu xoogaa soo kabsado. Dhulkan waxaa la geliyay qolofka diqsiga, kaas oo bilaabay inuu ku koro qaarad.
Hindiya gudaheeda, waxay rumaysan yihiin in dhulku (fidsan yahay, sida dadka dhulka deggan) ay u socdaan qiyaastii afar maroodi oo saaran dusha qolofka tortoise weyn. In kasta oo ay jiri karto mas halkaas jooga oo ku lug leh, in kasta oo aynaan taasi si cad noogu caddayn.
Waxaan sidoo kale haysannaa qoraa Terry Pratchett oo noogu soo bandhigay dunida Discworld buugaagtiisa, meesha diskka matalaya dhulka wuxuu ku socdaa afar maroodi, oo ku socda qool weyn kaas oo loo yaqaan 'Great A'Tuin' kaas oo dhex dabaalanaya hawada sare inta qorraxdu ku wareegsan tahay.
Ugu dambeyntiina, qabiilooyinka Polynesia qaarkood qoolleydu waxay la xiriirtaa awoodda caaqilkeeda, in kasta oo ay taasi ku kala duwanaan karto qabiil ilaa qabiil. Y waxaa loo isticmaalaa in lala xiriiriyo caafimaadka, taranka, cimri dherer, nabad iyo nasasho.
Badmaaxiinta iyo qoolleyda, naqshad dhaqameed
Waa la ogyahay in badmaaxyaashu ay xirtaan astaamo fara badan, badankooduna qaab qaab ahaan u dhisan yihiin. Dhexdooda waxaan ka heli karnaa qoryaha loo yaqaan 'Shellback'. Tattoo waxaa kaliya sameyn kara badmaaxayaasha ka talaabay Ecuador. Sida aad sawirka ku aragtaan, milkiilaha tattoo wuxuu ka talaabay Ecuador sanadkii 80.
Tattoo tattle turtle
Laga soo bilaabo filimka Raadinta NemoHaddii aadan weli arkin, waad arki kartaa, waxaan leenahay qoolleyda badda ee ku safra Bariga Dhexe ee Australia. Xaaladdan oo kale waxaan leenahay tattoo mid ka mid ah jeexjeexa qoolleyda badda, laakiin sidoo kale waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn. Qaabka loo yaqaan 'turtles' ee filimka ayaa ku martiqaadaya dadka nasashada si ay u qaataan sawirka iyo in falsafaddoodu ay tahay in la raaco waxa ay noloshu kuu sheegeyso.
Qolfka qalfoofka leh adduunkiisa qoloftiisa
Shaki kuma jiro xusuusin wixii aan horay uga soo hadalnay dhaqammada qaar oo aaminsan in qoolley weyn ay adduunka ku siddo qoloftiisa, inkasta oo ay jirto weecasho dhab ah oo asal ah. Ayaa garanaya, waxaa laga yaabaa in qofka sawirka leh uu u maleeyo in adduunyadu wax iska rogto oo taas, si dhakhso ah ama goor dambe, adduunku wuu dhammaanayaa ... Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa tusaale weyn oo ku saabsan sida lagu gaaro asal iyo mid gaar ah naqshadeynta.
Diiriga afarta cunsur
Waxaan sidoo kale aragnay Tattoo ee qoolleyda badda laakiin qoloftiisa waxaad ku arki kartaa afarta cunsur, dhulka, dabka, biyaha iyo dabaysha. Tixraac cusub oo ku saabsan xaqiiqda ah in qoolleydu ay adduunka dhabarka ku qaadaan (oo ay matalaan afarta cunsur ee aasaasiga ah ee sameeya). Midka hore, qaabkiisa dhererka awgiis, wuxuu u muuqan karaa mid aad u fiican hal gacan, halka kan labaad, oo ka sii laba jibbaaran, uu u muuqan karo mid aad ugu fiican laabta.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan taatuuga badda ee badda, shaki la'aan mawduuc siinaya ciyaar badan iyo tiro aan xad lahayn oo naqshado ah oo laga kala xusho. Noo sheeg, ma leedahay tattoo lamid ah? Ka waran Noo sheeg wax kasta oo aad rabto, waan jeclaan lahayn inaan ku aqrino, marka waad ogtahay… noogu soo dhiib faallooyinka!
Sawirada Tattoos Badda ee Turtle
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Tattoo turkeyga badda, oo matalaya midowga u dhexeeya dhulka iyo cirka
Tattoo silsilad, calaamadeyn dulmiga iyo xorriyadda
Tattoo calaamadda Zen, oo metelaysa dhammaystirnaan iyo xasillooni ruuxi ah